Damiirsamihii Ducada Lagu Gelbiyay: Maxamed Xaaji Cabdiraxmaan Gadhyare (Qormada 1aad) W/Q Siciid Gahayr | Togdheer News Network
Damiirsamihii Ducada Lagu Gelbiyay: Maxamed Xaaji Cabdiraxmaan Gadhyare (Qormada 1aad) W/Q Siciid Gahayr
Caawa waxa uu sooyaalku ku beegan yahay 28kii Feberweri 2018ka, waana sannad-guuradii labaad ee geeridii naxdinta lahayd ee Marxuun Maxamed Xaaji Cabdiraxmaan Gadhyare. Waxa ay maalin isku mid ah galbadeen Marxuun Mujaahid Axmed Maxamed Xasan (Axmed Jabbaan) oo ka mid ahaa halgameyaasha SNM. Labadoodaba Eebbe godka ha u nuuro.
Muddadaas dhan toddobada boqol iyo soddonka maalmoodba waxa aan damacsanaa in aan faafiyo maqaallo ku saabsan xuska iyo xasuustiisii inta aan ka helo. Tii Alle ayaa qornayd. Labadaas gu’ ee uu mootanaaba waxa isku lammaanaa bilashada Feberweri iyo xasuusta ku soo maaxata xiska. Waxa aan u mahad-naqayaa Xaaji Cabdirisaaq Yuusuf Ismaaciil oo lahaa soo-jeedinta qormooyinkan iyo cid kasta oo aqoon iyo erey igu biirisay.
Ujeeddada qoraallada baroordiiqda ahi waa inaynu ummadda u muujinno kaalinta qofka xurmada leh ee inaga baxa, in aynu noolaynno sooyaalka, in ugu yaraan loo duceeyo Ilaahayna naxariistii janno loo weydiiyo iyo in la cabbiro dareenka galiilyada leh ee ka dhasha geerida qofka xiskeenna ku ladhan. Kal hore oo aan baraha bulshada gaar ahaana “Facebook” ku faafiyay qormo taabanaysa maalmihii ugu dambeeyay bukaanka iyo bud-dhiggii Marxuun Maxamed Xaaji Cabdiraxmaan Gadhyare, wax aka falceliyay ugu yaraan 203 qof.
Maqaalka kowaad waxa aan ku xusi doonaa xanuunkii kediska ahaa, geeridii iyo aaskii Maxamed Xaaji Cabdiraxmaan Gadhyare.
Xilli ku beegan 13:30 maalinnimo ayuu taleefan ku soo dhacay nin la yidhaahdo Yaxye Cawil Cismaan (Yaxye Cawil Goondhaas) oo aanu wada joognay, aniga kaygu dab la’aan ayuu u demsanaa. Waxa loo sheegay geerida Marxuun Maxamed Xaaji Cabdiraxmaan Gadhyare, codka warka tebinaya iyo weedhihiisaba waa aan maqlayay. Judhiiba waxa i saaqay dareen naxdin iyo murugo ah, guud ahaanna waxa nagu xeermay xaalad tiiraanyo leh. Halkii ayaanu duco ka akhrinay.
Wakhti kooban haddii aan heedaddawsanaa waxa aan wacay laba qof oo xigaalka ah, goorta iyo goobta aasku ka dhacayo ayaa la ii sheegay. Codkooda ayaa igu sii kordhiyay caloolyowgii i hayay, taasina waxa ay sababtay in aan ku ilmeeyo goobtii aan joogay oo ay tobaneeyo qof ku sugnaayeen. Bulshadina waxa ay bilaabeen inay ii caqli-celiyaan “Walaal Siciid, waa xaq geeridu. Waa la wada dhimanayaa. Ilaahay ha u namaaxariisto’e, adiguna adkayso. Aammus oo ducee, iyadana ayaa inala gudboon” iyo ereyo kale ayaa la iigu laab-qaboojiyay. Waa ay yartahay inta la arkay indhahayga oo ilmaynaya, haddii aan awal qarsan jirayna maalintaas waan xejin kari waayay.
Marka ay tan oo kale dhacdo fadhi ma yaallo. Hawl kasta oo faraha lagu hayana waa la halmaamaa. Judhiiba waxa aanu qorshaynnay inaanu soo eegno gurigii qabanqaabada aasku ka socotay. Xilli salaaddii casar taagan tahay ayaannu gaadhnay beertii reer Xaaji Cabdiraxmaan Gadhyare oo guriga marxuumku ku yaallay. Halkaa waxa aanu ku kulannay qaar ka mid ah ubadkiisii, xigaal iyo xidid, annaga oo gudbinnay dhambaallo tacsi iyo duco ah. Maadaama oo aasku berri u dhacay waxa madasha joogay boqollaal haween ah, ragguna inta ay soo galaan ayay dib u laabanayeen. Waxa la qoondeeyay in la aaso aroornimada dambe, waayo waxa janaasada ka soo qayb-gelayay dad ka soo geeddiyay waddamada deriska ah iyo dunida kale. Dadyow ku kala nool Somaliland iyo dunida kale ayaa siyaabo kala duwan iigu soo diray farriimo Alle-bari iyo baroor-diiq ah.
Habeennimadii hawsha ugu badan ee aan hayay waxa ay ahayd xaqiijinta saacadda Marxuum Maxamed Xaaji Cabdiraxmaan Gadhyare loo gelbinayo baradiisii rasmiga ahayd iyo godka mahuraanka ah ee geeddiga loo wada yahay. Hiirtii aroornimo ayay guriga iigu yimaaddeen afar ka mid ah jaallayaashay oo aanu ku ballannay inaanu aaska isu raacnaa.
Ugu horreyn waxa aanu soo eegnay gurigii oo aan weli meydka la keenin, kaddibna waxa aanu u dhaqaaqnay dhinaca Cusbitaalka Guud ee Hargeysa, iyadoo na loo sheegay in la qaaday. Waxaanu ku soo laabannay halkii marxuumka laga qaadayay oo ay buux dhaafiyeen kumannaan dad ah iyo gawaadhi tiro badani. Cid maqnaydba way yarayd. Wakhti goorsheegtu ku dhowdahay eedaanka salaadda duhur ayaa la qaaday, waxaana la sii mariyay Masaajidka Tabliiqiyiinta ee ku yaalla Bariga Hargeysa. Halkaas oo lagaga tukaday Salaaddii Jinaasada ee waajibka ahayd.
Ilaahay ha u naxariisto’e waxa wadajir ugu tukaday uguna duceeyay kumannaan qof. Markii salaaddu dhammaatay ayaa loo dareeray Xabaalaha Naasa-hablood oo xabaashu ahayd. Anigu waxa aan dul-taagnaa qabriga, kolkii iilka la dhigay, cammuuddana lagu rogay ayaanu dhagaxii xabaasha saarnay.
Waxa madashaa iyo masaajidkaba ka duceeyay Sheekh Cismaan Cali Xuseen oo Eebbe uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo walaalkeen Marxuun Maxamed Xaaji Cabdiraxmaan Gadhyare.
“Qofna ma garanayo xilliga uu dhimanayo. Walaalkeen Maxamed Xaaji Cabdiraxmaan sideennaa oo kale ayuu u caafimaad-qabay, maantana wayngaa xabaashiisa joogna. Waxa muhiim ah in aynu Alle u toobad keenno oo geerida xasuusnaanno mar walba. Inuu qof wanaagsan ahaa waxad ka garanaysaa dadka aaskiisa yimi. Sidoo kale qoys fiican ayuu ka soo jeeday, oo aabbe wanaagsan oo khayr badan ayaa dhalay. Ilaahay ha u naxariisto.
Maxamed wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo siyaasad iyo ganacsiba ku jiray, aynu saamaxno haddaynu wax ka tabanaynno. Hadday cidi deyn ku lahaydna walaalladii ha la soo xidhiidhaan. Ilaahayow u dembi-dhaaf oo u naxariiso, annagana nooga daba naxariiso… Aamiin…Aamiin…” ayaa ka mid ahaa weedhihii Sheekh Cismaan Cali Xuseen.
Sidaa iyo duco ayaa lagu gelbiyay Marxuun Maxamed Xaaji Cabdiraxmaan Gadhyare. Kollay wedka lama huraayo, qaar ka mid ah saaxiibbadii aanu aaska isu raacnay ayaa Alle ku baryay “Eebbow waanu dhimanaynnaaye, waxaanu kaa tuugaynnaa in sidaa suubban ee Maxamed Xaaji Cabdiraxmaan Gadhyare oo kale na loo aaso. Maxaa ka fiican inay intaas oo qof kuu ergayso”.
Walaw aanay Masaajidka iyo xabaashu ahayn kuwo in badan kala fog, haddii aanu maalintaas gaadhiga nagu wadin dirawal xirfad lihi, waxa suurtagal noqon lahayd in aanu daahno/habsaanno. Waayo waxa madasha joogay kumannaan iyo kumannaan qof, boqollaal gaadiid ah ayaa is barbar iyo daba-socday. Tirada baabuurta u socda awgeed waxa kolba xidhmayay laamida.
24kii Feberweri 2016ka, maalin Arbaca ah ayaa la dhigay International Hospital ee magaalada Hargeysa, kaddib markii uu si ku-soo-booddo ah u dareemay xanuun xagga hab-dhiska neef-qaadashada ah oo markaa la ii tibaaxay in uu oof-wareen ahaa. Haddii aan xidhiidho sameeyayna waxa la ii sheegay in uu soo dhakhtarkii ka soo baxay, xaaladdiisuna fiican tahay. Isla maalintii ku xigtay baa cusbitaalka lagu celiyay. Laba cisho ka hor geeridiisa ayaa haddana laga deyriyay xaaladdiisa. Intii niyadda kala joogtay, nasiibkana aan u helin inay indhaha saaraan ayaan ka mid ahaa.
Ugu dambayntiina wuxuu Cusbitaalka Guud ee Hargeysa ku geeriyooday 28kii Feberweri 2016ka maalin Axad ah, isagoo shan cisho xanuunsayay, sababta dhimashadiisana waxa lagu tilmaamay mid la xidhiidha xagga neefsashada oo cidhiidhi gashay. Waa qaddar Alle, qof kastaaba sabab ayuu ku baxaa. 29kii Feberweri 2016ka ayuu xabaasha kowsaday oo la bud-dhigay.
Geerida Marxuun Maxamed Xaaji Cabdiraxmaan Gadhyare waxa ay ahayd mid si weyn looga dareemay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Dadka qaar ayaa kumannaan kiiloo-mitir usoo dhoofay si ay bud-dhiggiisa goobjoog uga ahaadaan, una sagootiyaan. Eebbe godka ha u nuuro walaalkeen Maxamed Xaaji Cabdiraxmaan Gadhyare..
La soco qormada labaad haddii Eebbe idmo..